:Bọchị: Jenụwarị 19, 2020
Ọchịchị Obodo Ordu na-aga n'ihu na-agba mbọ iji belata njupụta okporo ụzọ n'obodo ahụ. N'ime oke ọrụ ahụ Ordu mepere emepe guzobere, a ga-arụ ọrụ mgbasawanye na iwughachi ụzọ ụzọ gafere na Altınordu district. N'ime ogo agụmakwụkwọ, Ọchịchị [More ...]
The metrobus site na Zincirlikuyu ruo Avcılar kụrụ metrobus n'ihu nkwụsị Okmeydanı. Ọ bụ ezie na onye ọkwọ ụgbọ okporo ígwè ahụ merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ, ndị njem ahụ nwere oke ụjọ. [More ...]
N’ikwu okwu na Nnukwu ilgbọ njem mbụ nke Gayrettepe-Istanbul Airport Metro Project, nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan mere, Minista Turhan taa bụ ezigbo ihe atụ nke itinye ego nke Minista na usoro okporo ụzọ obodo. [More ...]
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) zara ndị boro na a kwuru na ya web saịtị ahaziri. Nkwupụta ahụ, "Ọrụ ndị ọrụ TCDD Tasimacilik AS ga-akwụsị na njedebe nke afọ a. [More ...]
A ga-eme ""lọ Ọrụ Nleta Na-ahụ Maka Nlegharị Anya" IIM Tourism Platform bụ echi. N’ime ihe omumu ihe a, ebe Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu ga-aga nzuko a nyocha, a ga-ekwu maka njem nlegharị anya Istanbul. Tọrọ ntọala n'okpuru nduzi nke Onye Isi Obodo Mayor Istanbul Ekrem İmamoğlu, 'Istanbul [More ...]
Academylọ ọrụ na-ahụ maka mgbanwe na ụlọ ọrụ, nke na-ebido n'ebumnuche nke inye ụlọ ọrụ ndụmọdụ kachasị ịtụ anya maka ụlọ ọrụ na-achọ ịmalite na mkpokọta ụlọ ọrụ na ike ha, ma nwee ọdịiche na ya Change Architects, na-aga n'ihu na-ekere òkè na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ekerịta nzukọ. [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan gara emume izizi ụzọ ụgbọ oloko nke ọdụ ụgbọ elu Gayrettepe Istanbul na Eyüpsultan. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ememe ahụ, Onye isi ala Erdoğan kwuru, "Anyị ga-ejikọ okporo ụzọ ụgbọ elu na-ejikọta Istanbul na isi obodo anọ nke obodo anyị." Transportgbọ njem na Istanbul [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru okwu na Gayrettepe-Istanbul Airport Metro Project Rail Welding Were. Erdogan chọrọ enwe oge oru ngo, ha maara Turkey ke akpatre isua 17, akụkọ ihe mere eme nke kasị oru ngo, ndị a oru ngo [More ...]
Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme mgbapụta mbụ Rail Welding Gayrettepe-Istanbul Airport, Onye isi ala, Recep Tayyip Erdoğan kwuru na anyị abịaghị n'oge na-arụ ọrụ Canal Istanbul Project. Erdogan gara n'ihu n'okwu ya dịka nke a: “Kanal Istanbul emeghachiri ugboro ugboro kemgbe 2011. [More ...]
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu kwuru okwu na "Kanal Istanbul Panel" nke İYİ Party na Onye isi oche Meral Akşener so na ndị na-ege ntị. N'ikwu na ọ kpọrọ oku, İmamoğlu kwuru, "Si ebe a ruo mmadụ niile, ndị ọchịchị niile nọ na Ankara, [More ...]
Site na mmekorita nke Izmir Metropolitan Municipal, TARKEM na Izmir Foundation, Nzukọ Ezumezu Izmir Route na-ahazi taa. A ga-enyocha nsonaazụ ndị a nwetara na nkuzi a, nke aha ndị ọkachamara si sonye, ​​ga-enyocha na nhazi nke ụzọ akụkọ ihe mere eme. Obodo Izmir Metropolitan, TARKEM [More ...]
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 19 Jenụwarị 1884 Mersin Adana Railway Line Construction
Akụkọ ihe mere eme nke okporo ụzọ Mersin Adana bidoro n'ememe. 19 Jenụwarị 1884 E hiwere Companylọ ọrụ Tesalonaịka-Manastır Ottoman site na itinye usoro iwu n'ime. Isi obodo nke ụlọ ọrụ ahụ, nke isi ụlọ ọrụ ya bụ Istanbul, dị afọ iri abụọ. [More ...]